Nhau - Chii chaunofanira kutarisisa pakutenga majasi evana?
Isu vanhu vakuru tinogara takatakura amburera patinenge tichifamba. Amburera haigone chete mumvuri, asiwo kudzivirira mvura. Zviri nyore kutakura ndechimwe chezvinhu zvakakosha pakufamba kwedu, asi dzimwe nguva hazvisi nyore kuti vana vabate amburera. Izvo zvinodikanwa kuti vana vapfeke raincoat yevana. Kune akawanda marudzi eanocheka evana pamusika. Chii chatinofanira kutarisisa pakutenga majasi evana? Vanotevera Foshan vanogadzira jasi remvura vanokuudza muchidimbu zvinhu zvinoda kutariswa pakutenga majasi evana!
1. Zvinyorwa zvejasi revana
Kazhinji kutaura, majasi evana emvura anogadzirwa nePV zvinhu, uye zvirinani zvinonaya zvinogadzirwa nePVC uye nylon. Hazvina basa kuti ndezvipi zvinhu, tinofanirwa kuzvichengeta mushure mekutenga, kuitira kuti raincoat igare kwenguva refu.
2. Kukura kwejasi revana
Kana tichitenga majasi evana, isu tinofanirwa kutarisisa saizi. Vamwe vabereki vanogona kufunga kuti majasi evana emvura anofanirwa kunge ari mahombe kuitira kuti vagogona kuapfeka kwenguva yakareba. Muchokwadi, majasi evana emvura akakurisa zvakanyanya haana kunaka, uye anounza vana kufamba. Kukanganisika, zvakanakira vana kuyedza majasi ekunaya pavanenge vachitenga majasi anonaya kuitira kuti vatenge jasi rinonyatsokodzera.
3. Pane here kunhuhwirira kunoshamisa
Kunhuwirira kana paine munhuwi unoshamisa pakutenga majasi evana. Mamwe mabhizinesi asina hunhu anoshandisa zvisina kufanira zvinhu kugadzira vana majasi ekunaya. Mvura inonaya yevana vakadaro ichave nekunhuwa kunhuwa. , Usatenge kana paine munhuwi usinganzwisisike.
Chechina, bhegi raincoat
Pakutenga jasi revana, jasi remvura rine nzvimbo yehomwe yechikoro inosara kumashure. Vana kazhinji vanoda kutakura bhegi rechikoro. Naizvozvo, kana uchitenga jasi revana, unofanirwa kutenga raincoat ine imwe nzvimbo kumashure.
Shanu, majasi evana anonaya
Kana uchitenga majasi anonaya evana, ita shuwa yekutenga majasi anonaya nemavara akajeka, kuitira kuti vatyairi neshamwari dziri kure vagovaona uye vadzivise tsaona dzemumigwagwa.